Maqaallada Max Kremer ee Martech Zone |
Maqaallada by Max Kremer
Max Kremer waa Aasaasaha iyo CTO ee Tijaabinta, tifaftire muuqaal ah oo loogu talagalay dejinta falanqaynta webka.
Max wuxuu ku nool yahay cunaa oo neefsadaa tikniyoolajiyad, mootooyin, iyo beryahan dambe, is-naftaada u dayactiraa mashaariicda. Wuxuu ruxayaa gadhka jiilaalka.
Khamiista, Noofembar 13, 2014 Isniin, Janaayo 9, 2017 Max Kremer
Maalmahan, ku dhowaad dhammaan qalabyada falanqaynta ee halkaa ka jira ayaa kuu oggolaanaya inaad la socoto dhacdooyinka gujinta. Gujintu waxay matalayaan inta badan isdhexgalka uu isticmaaleha la leeyahay bartaada. Laakiin mar haddii aad hayso xogtaas, hadda waa maxay? Waad raad raaci kartaa guji kasta oo booqde sameeya, laakiin taasi waa daadad xog ah oo lagu kala shaandheyn karo. Guji raadinta, markaad si sax ah u dalbato, waxay noqon kartaa mid ka mid ah aaladaha ugu awooda badan ee lagu fahmo sida saxda ah ee dadku uga jawaabaan waxyaabahaaga iyo sida